ပိတ်ရက်ရှည် ကြီးပြီးလို့ ရုံးပြန်မတက်ချင်တဲ့အခါ......... - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း » စိတ်ကျန်းမာရေး » ပိတ်ရက်ရှည် ကြီးပြီးလို့ ရုံးပြန်မတက်ချင်တဲ့အခါ………
ပိတ်ရက်ရှည် ကြီးပြီးလို့ ရုံးပြန်မတက်ချင်တဲ့အခါ………
ပိတ်ရက်တွေမရောက်ခင်က ပျော်စရာအကောင်းဆုံး အချိန်လေးပါ။ ပိတ်ရက်အတွင်းမှာလည်း ပျော်နေဆဲပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ပိတ်ရက်ရှည် ကြီးပြီးလို့ ပြန်ဖွင့်ခါနီးပြီဆိုရင် စိတ်ဓာတ်က အလိုလိုကျလာပြီ။ ရုံးပြန်တက်ရတော့မယ်ဆိုရင်တော့ အရမ်းပျင်းပြီး ရုံးမတက်ချင်တဲ့ ဆန္ဒက အရမ်းများနေပြီပေါ့။ ရုံးကလည်း မတက်လို့မဖြစ်ဘူး။ ရုံးတက်ဖို့လည်း စိတ်ကလုံးဝမပါဘူးဆိုသူလေးတွေအတွက် ဒီဆောင်းပါးလေးက အကောင်းဆုံး ကူညီပေးနိုင်မှာပါ။
ပျော်ရွှင်စရာ ရုံးပိတ်ရက်ရှည် ပြီးလို့ ရုံးပြန်မတက်ချင်တဲ့အခါ
ပျော်ရွှင်စရာ ရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးလို့ ရုံးပြန်မတက်ချင်တဲ့အခါ ဒီနည်းလမ်းလေးတွေက အဆင်ပြေစေမှာပါ။ ဒီတော့ ရုံးပြန်တက်ဖို့မပျင်းရအောင်
ရုံးပိတ်ရက်ပြီးခါနီးလိုအချိန်မျိုးမှာ ရင်းနှီးရသူတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ဖုန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် အပြင်မှာ ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးဖြစ်ဖြစ်စကားစမြည်ပြောပါ။ အားလပ်ရက်ဘာတွေလုပ်ဖြစ်တယ်။ ဘယ်လိုမျိုးအချိန်ကို ကုန်ဆုံးခဲ့တယ်။ သူရော အားလပ်ရက်မှာ ဘာတွေလုပ်ဖြစ်လဲဆိုတာကို မေးမြန်းပြောဆိုပေးပါ။
အခန်းအောင်းနေမယ်။ အိမ်တွင်းအောင်းနေမယ်ဆိုတာက ကိုယ်တိုင်လည်း ကြိုက်တဲ့ အပြုအမူတစ်ခုဆိုပေမယ့် အားလပ်ရက်မှာ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချိန်းပြီး အပြင်ထွက်လိုက်တာ စိတ်ကိုလန်းဆန်းတက်ကြွစေနိုင်ပြီး အားလပ်ရက်ပြီးလို့ ရုံးတက်ချင်စိတ်မရှိတာကိုလည်း သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပိတ်ရက်မှာ အပြင်လေးဘာလေးသွားပါ။ ဈေးဝယ်ထွက်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။
စိတ်ဖိစီးနေတယ်။ စိတ်ဓာတ်ကျနေတယ်ဆိုတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာပါ။ Gym သွားဆော့တာမျိုးမဟုတ်ရင်တောင် မနက်ခင်းစောစော ထပြေးတာမျိုး၊ လမ်းလျှောက်တာမျိုး နဲ့ အကြောလျှော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာမျိုး လုပ်ပေးပါ။ ဒါက စိတ်ရောကိုယ်ပါ တက်ကြွလန်းဆန်းစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းပါ။
​နောက်သို့ကို ခေါက်ထားလို့ ရှေ့သို့ကိုသာ အာရုံထားပါ
အားလပ်ရက်ကပြီးသွားပါပြီ။ ဒါကို ပြန်စချင်လိုက်တာ၊ ရုံးမတက်ချင်ဘူးလို့တွေးနေတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ဒုက္ခပေးနေတာပါ။ မတက်ချင်လည်း အားလပ်ရက်ပြီးသွားရင် ရုံးကပြန်တက်ရမှာပါပဲ။ နောက်တစ်ချက်က အချိန်တွေကို လိုသလို နောက်ပြန်ဆုတ်နိုင်တဲ့ အစွမ်းကလည်း မရှိပါဘူး။ ဒီတော့ တက်ရမယ့်ကိစ္စကို ထိုင်စိတ်ညစ်ခံနေမယ့်အစား ရုံးပြန်တက်ဖို့ကိုပဲ အကောင်းဆုံးတွေးလိုက်ပါ။
ပိတ်ရက်မှာ ဟင်းကောင်းကောင်းချက်စားတာကလည်း နည်းလမ်းကောင်းတစ်ရပ်ပါ။ အားလပ်ရက်မှာ ဟင်းချက်တာက အရသာရှိရှိ ဟင်းတွေကို မြည်းစနမ်းခွ်င့်ရစေရုံတင်မကပါဘူး။ သင့်ကို ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတိုးစေနိုင်သလို မတူတဲ့အတွေးသစ်တွေကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ အားလပ်ရက်ပြီးလို့ ရုံးပြန်တက်ရမှာကို သိပ်မပျင်းတော့တာပါပဲ။
အားလပ်ရက်မှာ ခရီးတိုလေးတွေသွားတာက စိတ်ခံစားမှုကိုကောင်းစေပြီး စိတ်ဓာတ်ကျတာနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်တာမျိုးတွေမဖြစ်အောင် အကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါက အားလပ်ရက်ပြီးလို့ ရုံးပြန်မတက်ချင်တာမျိုးမဖြစ်အောင်လည်း အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပိတ်ရက်မှာ ခရီးတိုလေးထွက်ဖြစ်အောင် ထွက်ဖို့ပြောပါရစေ။
အားလပ်ရက်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းတာက စိတ်လက်ပေါ့ပါးစေမယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ အကောင်းမြင်စိတ်ရှိသူတွေ။ ကိုယ်ချစ်ရသူတွေနဲ့ အချိန်တွေကို ကုန်ဆုံးတာက စိတ်ဖိစီးတာ၊ စိတ်ပူပန်တာတွေဖြစ်နိုင်ခြေနည်းသွားစေပြီး အတွေးအမြင်သစ်တွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့ အကောင်းဆုံးအားဖြည့်ပေးနိုင်မှာပါ။ မတူကွဲပြားတဲ့ အတွေးအမြင်သစ်တွေကိုလည်း သိရှိခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အားလပ်ရက်အတွင်းမှာ တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ အဖြစ်အပျက်တွေကို ချရေးထားပါ။ ဒါတွက ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်တိုင်းစိတ်ပျော်ရွှင်မှုကို ခံစားရစေပြီး စိတ်အားတက်စေဖို့ အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် အားလပ်ရက်အတွင်းပျော်စရာတွေကို ချမှတ်တာက အကောင်းဆုံးသောအမှတ်တရတွေကို သတိရစေမှုနဲ့အတူ အားလပ်ရက်ပြီးဆုံးချိန်မှာ အလုပ်ခွင်ပြန်မဝင်ချင်တာမျိုး မဖြစ်အောင်လည်း အကောင်းဆုံးအားဖြည့်ပေးနိုင်မှာပါ။
တရားထိုင်တာက စိတ်ရောကိုယ်ပါ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ရပ်ပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုကို ပြေလျော့စေပြီး စိတ်ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်စေဖို့ အကောင်းဆုံးအားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ပျင်းရိမှုတွေကို ပြေပျောက်စေပြီး စိတ်ကိုလန်းဆန်းစေနေတာကြောင့် လုပ်ဆောင်ရမယ့် ကိစ္စတွေကို အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်စေမှာပါ။
ကဲ..ပိတ်ရက်ရှည်ကြီးပြီးလို့ ရုံးမတက်ချင်ဘူးဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းလေးတွေကို လက်တွေ့အသုံးချကြည့်လိုက်နော်။
သင် စိတ်ဖိစီးတဲ့ စိတ်ဝေဒနာ ခံစားနေရပြီလား
ရေနွေးကြမ်း ကြိုက်တဲ့ ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတွေ စိတ်ဓာတ်ကျနိုင်ခြေနည်း
ဆေးလိပ်သောက်သူတွေက စိတ်ဓာတ်ကျနိုင်ခြေပိုများတယ်ဆိုတာ သိပြီးပြီလား….
မိမိကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ခြင်းမှတဆင့် စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် ဘာကောင်းကျိုးတွေရနိုင်မလဲ
စိတ်ဓာတ်ကျ ခြင်းကို ဆန်းစစ်ကြည့်ခြင်း
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 13, 2020 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 14, 2020
7 Tips to Beat the Post-Holiday Blues https://www.psychologytoday.com/ca/blog/depression-management-techniques/202001/7-tips-beat-the-post-holiday-blues Accessed Date 13 February 2020
11 Simple Ways to Prevent the Post-Holiday Blues https://www.thehealthy.com/mental-health/post-holiday-blues/ Accessed Date 13 February 2020
Blow Off Post-Holiday Blues https://www.webmd.com/balance/features/blow-off-post-holiday-blues#1 Accessed Date 13 February 2020
ကျန်းမာတဲ့ Office Life တစ်ခု ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ…….
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, အာရုံကြောရောဂါများအကြောင်း, ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားကျန်းမာရေး, ယောဂလေ့ကျင့်ခန်း
ယောဂလေ့ကျင့်ခန်း မစတင်ခင် ဒါတွေ ပြင်ဆင်ထားပါ
တနင်္လာနေ့ ရောက်တိုင်း ရုန်းကန်နေရသူတွေ ရှိလား…..
ကလေးတို့အတွက် အားကစား ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ
ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ သားသားမီးမီးနဲ့ မေမေတို့ ဘာတွေအတူတူလုပ်ကြမယ် စိတ်ကူးလဲ…..
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, အစားအသောက်နှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းညှိခြင်း, ကျန်းမာရေးနဲ့အာဟာရ
ပရိုတင်းမှုန့် သောက်လို့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ရနိုင်တဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ